မဒေါင်းလုပ် APK မအဘို့ Android
ExpressVPN အပလီကေးရှင်းသည်၎င်းတို့၏ Android စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိလုံခြုံစွာ ၀ င်ရောက်လိုသူများအတွက်ရှာဖွေနိုင်သော VPN application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတစ်ရက်သာအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးသော်လည်းတစ်ရက်တာကာလပြီးနောက်သင်အခကြေးငွေအတွက်ရက် ၃၀ အစမ်း ၀ ယ်ယူနိုင်သည်၊...
HappyMod သည် Android ဖုန်းများပေါ်တွင် APK ကဲ့သို့တပ်ဆင်နိုင်သော mod download application တစ်ခုဖြစ်သည်။ HappyMod သည်လူကြိုက်များသော Android ဂိမ်းများအကြား ၁၀၀% အလုပ်လုပ်သည့် mods များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး With၊ Brawl Stars, Minecraft, Roblox ။ ဂိမ်း mode များအပြင် HappyMod application သည် Spotify နှင့်...
Bus Simulator: Ultimate သည်သင် Android ဖုန်းတွင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည့်ဘတ်စ်ကား Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ Bus Simulator ဂိမ်းသည် Truck Simulator 2018 Europe Europe ၏ထုတ်လုပ်သူများထံမှမြို့ကြီးများအကြားဘတ်စကားမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ သင်ဘတ်စ်ကား simulator ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ငါအကြံပေးလိုပါတယ် ၎င်းသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍...
GBWhatsapp (APK) သည် SMS အက်ပလီကေးရှင်းကိုအစားထိုးပေးသောဆက်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်း WhatsApp ကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အခမဲ့ app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တရားဝင် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ချင်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်၊ တူဖုန်းတစ်လုံး၌ WhatsApp အကောင့်များစွာသုံးခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့်ရက်ကိုပိတ်ခြင်း၊ စာများဖျက်ခြင်း၊...
Farming Simulator 18 သည်သင်၏ Android ဖုန်းတွင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးလယ်ယာ simulator ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းလ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိလယ်ယာခြင်း simulation ဂိမ်းတို့တွင်လက်တွေ့ကျသောကစားနည်းနှင့်အကြောင်းအရာများဖြင့်ကွဲပြားသော Farming Simulator...
Truck Simulator 2018: ဥရောပ၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၊ တူရကီ၊ Android တစ်ခုတည်းမဟုတ်၊ မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးထရပ်ကား Simulator ဂိမ်း မျိုးဆက်သစ်လျှပ်စစ်ထရပ်ကားများသည်လက်တွေ့အသွားအလာ၊ လက်တွေ့ရာသီဥတု၊ ကွဲပြားသောလမ်းများ၊...
Trash Truck Simulator သည် Android operating system ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကစားနိုင်သောထရပ်ကားခြင်း simulation တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းကမြို့လယ်နဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းတွေမှာရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂိမ်းမှာမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသတယ်။ Trash Truck Simulator သည် high resolution ဂရပ်ဖစ်ဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်း simulation...
Taxi Simulator 2018 သည်သင်၏ Android ဖုန်းတွင်အခမဲ့ download လုပ်ပြီးကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးအငှားယာဉ် Simulator ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကစားနည်းအရရောအခြားအငှားယာဉ်ခြင်း simulation ဂိမ်းများထက်သာလွန်သောထုတ်လုပ်မှုကို Truck Simulator 2017 နှင့် City Driving games တို့နှင့်ငါတို့သိသော Zuuks Games မှတီထွင်ခဲ့သည်။ တူရကီဘာသာစကားအထောက်အပံ့ပါ...
APKPure သည်အကောင်းဆုံး APK download sites များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Android အက်ပလီကေးရှင်း APK သည် Android ဂိမ်း APK ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်များကိုကမ်းလှမ်းသောမိုဘိုင်း application တစ်ခုရှိပြီးစိတ်ချရသောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ APKPure (APK Downloader) ဖြင့်သင် Google Android မှဒေါင်းလုပ်မရနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ် Android အက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများကိုသင်၏ Android...
Minibus Simulator 2017 သည်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်လက်တွေ့မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သော minibus ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android operating system ကိုအသုံးပြုပြီးမင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေမှာအခမဲ့ကစားနိုင်တဲ့ Minibus Simulator 2017...
Construction Simulator2သည် diggers နှင့် dozers ကဲ့သို့ကွဲပြားသောလေးလံသောစက်များကိုသုံးလိုလျှင်သင်ကစားခြင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်သောခြင်း simulation တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး Simulator2တွင် Android operating system ကို သုံး၍ သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်ကစားနိုင်သော simulation game...
Bus Simulator 3D နှင့်အစစ်အမှန်မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ၊ ၎င်းကို simulation game ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်နှစ်သက်စေမည့်ပျော်ရွှင်စရာကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ပါ။ မတော်တဆမှုတစ်ခုခုမှာပါ ၀ င်လျှင်သင့်ယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးပျက်စီးသွားသည်။...
Driving Academy Simulator 3D သည်မောင်းနှင်ရန်သင်ယူလိုသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android ပလက်ဖောင်းမှအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သော Driving Academy Simulator 3D ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၊ မြို့ထဲနှင့်လူအသွားအလာနည်းအောင်မောင်းနှင်နည်းကိုသင်သင်ယူနိုင်သည်။ လူတိုင်းကားမောင်းချင်ကြသည်၊ ဒါပေမယ့်ကားမောင်းရတာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။...
Ultimate Car Driving Simulator သည် Android ပေါ်တွင်သာမကဂရပ်ဖစ်တွင်ပါအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ဖြင့်မောင်းနှင်သော simulation game တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းက Need For Speed ​​ပြိုင်ကားဂိမ်းမှာလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်လည်နိုင်ပြီးသင်ဆန္ဒရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀ င်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့မောင်းနှင်မှုရူပဗေဒ၊ မိုဘိုင်းကားအသံ၊...
Sunny House: စိတ်ကူးယဉ်တိုက်ဆိုင်မှုပေါင်းစပ်ဂိမ်း၌စိန်ခေါ်ပဟေိများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ဥယျာဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေသည်။ Merge Manor: Sunny House ကို download လုပ်ပါ Sunny သည်သူမ၏အဘွား၏ဥယျာဉ်ကို၎င်း၏ယခင်ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်လိုက်ဖက်သောပန်းများအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီပေးပါ။ Sunny...
Transcriber သည်သင်နှင့်မျှဝေထားသော WhatsApp အသံမက်ဆေ့ခ်ျများ/အသံသွင်းခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သင်သုံးနိုင်သောအခမဲ့ Android app တစ်ခုဖြစ်သည်။ WhatsApp တွင်သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုထံမှမိနစ်ကြာစကားပြောဆိုမှုများကိုနားထောင်ရသည်မှာပင်ပန်းနေလျှင်အသံစာကို text message သို့ပြောင်းပေးနိုင်သော Transcriber application ကိုသင်စမ်းကြည့်သင့်သည်။...
City theft simulator သည် GTA ကဲ့သို့ mobile game တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အားလပ်ချိန်ကိုဂိမ်းအပြည့်ဖြင့်ကစားလိုလျှင်ကစားနိုင်သည်။ ငါတို့သည် Android operating system ကိုအသုံးပြုပြီးမင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေမှာအခမဲ့ခိုးယူလို့ရတဲ့ open world-based action game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ City theft simulator...
သာမန်စစ်ပွဲဂိမ်းများထက်ကွဲပြားစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Tactical Battle Simulator သည်ထူးခြားသော simulation game တစ်ခုအဖြစ်အာရုံစိုက်စေသည်။ နည်းဗျူဟာမဟာဗျူဟာများဖြင့်စီစဉ်ထားသော cutthroat စစ်ပွဲသည်သင့်အားစောင့်ကြိုနေသည်။ စုစုပေါင်းကွဲပြားခြားနားသောယူနစ် ၈၀ ရှိသောဤဂိမ်းတွင်သင်အလိုရှိသောစစ်တပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စစ်ပွဲကိုစနိုင်သည်။...
Lord of the Rings: Rise to War သည် Netease Games မှထုတ်လုပ်သော Lord of the Rings series ၌တရားဝင်မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ The Lord of the Rings: Rise to War ကို download လုပ်ပါ အချစ်၊ ချစ်ကြည်ရေး၊ ဂုဏ်ကျက်သရေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးတုန်းကပုံပြင်တွေဟာအတိတ်ကအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်စွပ်၏စစ်ပွဲသစ်သည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်ရှိနေပြီး Middle-earth...
Farmville3သည် Android operating system ဖြင့်သင်၏ smart devices များပေါ်တွင်ကစားနိုင်သောအခမဲ့လယ်ယာခြင်း simulation game တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကဒဏ္legendaryာရီလယ်ယာကစားပွဲဖြစ်ခဲ့သော Farmville သည်အချိန်ကြာပြီးနောက်စီးရီးသစ်ဂိမ်းနှင့်အတူဒီမှာရှိသည်။ ၎င်း၏အရောင်အသွေးစုံရုပ်ပုံများ၊...
Flightradar24, ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးပျံသန်းမှုခြေရာခံလျှောက်လွှာ; နိုင်ငံ ၁၅၀ တွင်နံပါတ် ၁ ခရီးသွား app ။ သင်၏ Android ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်ကိုတိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခြေရာခံစက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလေယာဉ်ပျံများအားအသေးစိတ်မြေပုံပေါ်တွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီရွေ့လျားကြည့်ပါ။...
Modern Warships ဆိုတာက Android ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ မင်းအွန်လိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ online မှာရေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာမင်းကိုအနိုင်ပေးတယ်။ Modern Warships Android ကိုရယူပါ အင်အားအကြီးဆုံးခေတ်သစ်စစ်သင်္ဘောများသည်သင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေနိုင်သည်။ သင်၏စစ်မှန်သောအွန်လိုင်းအရေးယူမှုဂိမ်း Modern Warhips တွင်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တိုက်လှန်ပါ။...
TapTap (APK) သည် Google Play Store ကိုအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်သုံးနိုင်သောတရုတ် app store တစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Play Store တွင်မရနိုင်သော PUBG ကဲ့သို့လှပသော Android ဂိမ်းများကိုဤအပလီကေးရှင်းမှတဆင့် download လုပ်ပြီးမစောင့်ဘဲကစားနိုင်သည်။ Android ဘက်တွင်စတိုးဆိုင်များနှင့် APK ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီး Google Play Store...
Dream League Soccer သည်မိုဘိုင်းလ်တွင်ဒေါင်းလုပ်အများဆုံးနှင့်ကစားသောဘောလုံးဂိမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dream League Soccer သည်ရာသီသစ်ဖွင့်ချိန်တွင်မိုဘိုင်းလ်ဘောလုံးကစားနည်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Dream League Soccer 2019 ကို Android ဖုန်းများအား APK အဖြစ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ Dream League Soccer 2019 Download ခလုတ်ကို...
Games2win မှတီထွင်ထားသော Super High School Bus Driving Simulator 3D နှင့်လက်တွေ့ကျသောကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။ မိုဘိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သော Super High School Bus Driving Simulator 3D ဖြင့်ငါတို့သည်ကစားသမားများကိုစုဆောင်းပြီးသူတို့၏ကျောင်းများသို့ပို့ဆောင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ 3D...
Top Eleven 2021 သည်ဆုရဘောလုံးမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ Star-stud အသင်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမှသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အားကစားကွင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းအထိ Top Eleven မှအရာအားလုံးသည်သင်၏စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကလပ်သည်သင်၏ကလပ်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားသန်း ၂၅၀...
Zemana Antivirus သည် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်တီထွင်ထားသောအဆင့်မြင့် antivirus application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Zemana Antivirus 2021၊ spyware ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအပလီကေးရှင်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို Softmedal မှတဆင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့ download လုပ်နိုင်ပြီး malware၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ keylogger များ၊ trojans...
Farming Simulator 20 သည် APK နှင့်အတူအလိုအပ်ဆုံး Android ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Farming Simulator 20 APK သည် cheat များမပါဘဲရှာရန်ခဲယဉ်းသည်။ Google Play တွင်အခကြေးငွေ ပေး၍ လွှတ်ပေးသည်။ Farming Simulator 20 APK ၏ downloads သည် modded လုပ်ပြီးအလွန်စိတ်ချရသောဗားရှင်းမဟုတ်ပါ။ ဂိမ်းကစားခြင်းကို Google Play မှလုံခြုံစွာဒေါင်းလုပ် လုပ်၍...
Rush Rally3သည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အများဆုံး download လုပ်ပြီးကစားသည့်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး console ကိုအရည်အသွေးပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်းရှာနေလျှင်ငါအလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။ မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အဖြစ်မှန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်ပြိုင်ကားများ၊ လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီသောလမ်းကြောင်းများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောမောင်းနှင်မှု၊...
Kingdom: The Blood Pledge သည် MMORPG ဂိမ်းတွင်ရက်စက်စွာပွင့်လင်းဆုံးသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဤသွေးသွင်းခြင်း၌ပူးပေါင်းပါ ၀ င်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ မှကစားသမားများနှင့်တိုက်ခိုက်ပါ။ နိုင်ငံတော်ကို Download လုပ်ပါ Kingdom: The Blood Pledge သည်ခိုင်မာသည့်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဖြစ်ပြီးဂန္ထဝင် PC MMO ဂိမ်းများကိုအခြေခံသည်။...
Call Voice Changer သည် Android ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များတွင်သုံးနိုင်သောအသံပြောင်းလဲခြင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်များအားနောက်ပြောင်ခြင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဤအပလီကေးရှင်းသည်သင်အားအခြားသူများကကြားနိုင်အောင်ဖုန်းခေါ်နေစဉ်သင်ဤခေါ်ဆိုမှုများပေါ်တွင်အသံသက်ရောက်မှုများတင်ခွင့်ပြုသည်။...
NightOwl VPN သည် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်မြန်ဆန်။ လုံခြုံမှုရှိပြီးတည်ငြိမ်။ လွယ်ကူသော VPN app ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ထောင်နှင့်ချီသော VPN ဆာဗာများရှိသည့် NightOwl VPN သည်အကန့်အသတ်မရှိသော bandwidth၊ အမြန်နှုန်း၊ ping နိမ့်မှုနှင့်စမတ်ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း /...
Mario Kart Tour သည် Android operating system ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ကစားနိုင်သည့်အသစ်စက်စက်မိုဘိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ စူပါမာရီယိုစီးရီး၏နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းဂိမ်း Mario Kart Tour...
FOXplay သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်နိုင်သောပလက်ဖောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး FOX တီဗီအကြောင်းအရာပထမအဆင့်တွင်သာပါဝင်ပြီးအနာဂတ်၌အခြားအကြောင်းအရာများကိုလက်ခံကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း Fox ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်လိုက်သည်။...
WhatsApp Plus APK သည် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းသို့အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များဖြည့်စွက်ပေးသည့် Android ဖုန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ WhatsApp Plus သည် Facebook နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်တတိယပါတီပုံစံဖြစ်သည်။ တရားဝင်မဟုတ်သော WhatsApp application များသည်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ အသုံးပြုစဉ်တာ ၀...
Retro Goal သည် Arcade ဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနှစ်သက်သောဘောလုံးပွဲဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောအားကစားဂိမ်းများဖြစ်သော New Star Soccer နှင့် Retro Bowl ကိုတီထွင်သူများအနေဖြင့်၎င်းသည်လျင်မြန်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် arcade soccer gameplay နှင့်ရိုးရှင်းသောအဖွဲ့၏စီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ပထမကျန်ပွဲ ၁၀...
HealthPass မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသည်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံသားများအတွက်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးသောကျန်းမာရေးပတ်စ်ပို့အပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ Android ဖုန်းသို့အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သော HealthPass မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး၊...
CarX Drift Racing2သည် CarX စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကစားသမားသန်း ၅၀ ကျော်ရှိသော drift racing ဂိမ်းသစ်တွင်ဂရပ်ဖစ်မှပြသထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုနောက်အဆင့်သို့သယ်ဆောင်ပြီးဂိမ်းပုံစံအသစ်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ တစ်ခုတည်းနှင့် multiplayer...
Snapchat သည်လူကြိုက်များသောလူမှုမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Social media application သည်၎င်း၏မှန်ဘီလူးများနှင့် filter များနှင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်များအသုံးပြုသည်။ Snapchat, live chat (ဗွီဒီယိုနှင့်ရေးသားထားသောချက်ချင်း)၊ ပုံပြင်များ (အုပ်စုလိုက်အဖြစ်အပျက်များ)၊ 3D bitmojis၊ မြေပုံ (တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်များ၊ တည်နေရာမျှဝေခြင်း)...